DHEGEYSO-Mid kamid ah beelaha Puntland oo taageertay go’aankii madasha doorashada. – Radio Daljir
Seteembar 10, 2016 3:10 b 0
Garoowe, Sep 10 2016–Nabadoono, Cuqaal, haween iyo dhalinyaro kasoo jeeda mid kamid ah beelaha Puntland oo xalay shir kuyeeshay magaalada Garoowe ayaa waxa ay soodhoweeyeen qodobadii kasoo baxay shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashada Soomaaliya.
Dhinacyadii ka qaybgalay shirkaasi ayaa waxa ay soodhoweeyeen in xubintii beeshu ay kulahayd aqalka hoose ama barlamaanka Soomaaliya loo wareejiyo magaalada Kismaayo ee Jubbaland beesha qaybteeda degan.
Beeshu waxa ay arrinkaani ku sababaysay in aqalka hoose lagu soo xulayo hab qabiil ama, qof walba oo beesha katirsana uu xaq uleeyahay inuu kursigaasi qabto meelkasta oo uu joogo.
Qaramada Midoobey oo dhaqaale ugu deeqday Barakacayaasha Soomaaliyeed.